Kanneen Laybeeriyaa fi Biyyoota Afrikaa Kaan Keessatti Dawaa Sammuu Nama Adoochuu Dhiheessan Dura Dhaabbachuu
Asiyaa fi kibba Ameerikaa irraa kanneen ta’an kanneen dawaa sammuu adoochu Herooyinii fi kokeen jedhamu deddeebisan, biyyoota uffee Sahaaraa gad jiran kanneen bu’uurri misooma isaanii mutaa’aa ta’e keessatti dawaan sammuu adoochu kun nannoo daangaa irra utuu hin beekamin akka daddarbu taasise. Bara 2013 fi 2016 yeroo jiru gidduutti walumaa gala ardii Afriikaa keessatti kan qabame baatii sadan jalqabaa kan bara 2019 caalaa kokeeniin Giinii Bisaawoo fi Keb-verdee keessatti qabame.
Mootummaan Ameerikaa balaa babal’ataa adeeme kanatti duuluu gargaaruuf humnootii naga eegumsaa seera eegisuu irratti bobba’an kan Laayibeeriyaa keessaa fi deggersa meeshaalee adda addaa fi teeknooloojii gochaa jira. yeroo dhiyoo Laayibeeriyaan dhaabbata dhimma dawaatti duuluu LDEA biraa unifoormii, kophee, sibila harka namaa ittiin hidhan, laaptoopp, printer fi meeshaalee namoota dawaa sammuu adoochu deddeebisanitti duuluuf gargaaru argattee jirti.
Embasii Ameerikaa kan Laayibeeriyaa jirutti daayirektorri yeroofii kan dhimmootii dawaalee fi seera eegsisuu Stephen H. Kissik akka jedhanitti Mootummaan Yunaayitid Isteetis waggoota dheeraa dhaaf LDEA waliin michummaan hojjetee jira.
Gaazixaa Laayibeeriyaa Front Page Afriikaa jedhu waliin gaaffii fi deebii geggeessaniin LDEA fi mootummaa Laayibeeriyaa waliin Yunaayitid Isteetis gara fuula duraatti waliin hojjechuu barbaaddi jedhan.
Keeniyaa, Gaanaa fi biyyoonni Afriikaa hedduunis dawaa sammuu adoochu deddeebisuut fi rakkoo isa waliin wal qabatutti duuluuf Yunaayitid istees waliin michummaa uummatanii jiran. Heather Merritt, itti aanaa ministrii dhimma alaa kan dhimmootii dawaa sammuu adoochu kan sadarkaa addunyaa fi seera eegisuu duraanii ti. Dhiyeenya ibsa kennaniin Ameerikaan dawaa deddeeisuu Afriikaa keessaatti duuluuf invest akka gootuuf biyyootii Afriikaa dimokraatawaa ta’an waliin daran michummaa akka jabeessitu ibsaniiru. Dhaabolii dawaa deddeebisan fi yakkamtoota kanneen birootti duuluun dantaa Yunaayitid Isteetisiif ta’a. sababiin isaas nuti kan wal taanee hojjennu biyyoonni Afriikaa keessaa nageenyi isaanii kan eegame, kan badhaadhan akka ta’an barbaanna jedan.
Daldalli akka sosso’u barbaanna, uummati uummata waliin hidhata akka qabaatu feena. Gama biraan immoo michoota cimoo fi dandeettii qaan ennaa qabaannu ni wayyoofna jedhan.
Biyyoonni ennaa yakkamtoota dawaa deddeeisaniin saamaman, jeeqamaa fi mlaammaltumaan mootummoota sirna dadhabsiisuu fi uummataafis balaa ta’uu danda’a.
Mootummoonni Afriikaa deddeebii dawaa sammuu adoochu kanatti akka walabooman gargaaruuf Yunaayitid Isteetis malaammaltummaa fi hojiin yakkaa ni daangeffama jechuun abdatti.
Itti aanaa ministrri duraanii Merrit, akka jedhanitti dhaabiliin dhimma farra dawaa fi seera eegisuu irratti hojjettan kan afriikaa keessaa dandeettii ofii cimsuuf mootummoota waliin wal ta’iinsaan hojjetu jedhan jechuu dhaan gulaalaan har’aa yaada isaa xumura.